Niverina tany Belize tamin'ny volana Aogositra ny Cruise Cruise Norveziana
Home » Lahatsoratra farany farany » Cruising » Niverina tany Belize tamin'ny volana Aogositra ny Cruise Cruise Norveziana
Vaovao Mafana Belize • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Cruising • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao lafo vidy • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny Ministeran'ny fizahantany sy ny fifandraisana am-pielezana ary ny Birao fizahan-tany any Belize dia miarahaba an'ity fanambarana miverina amin'ny serivisy ity avy amin'ny Cruise Line norveziana
Ny Joy Norvezy dia hampiditra an'i Belize ho anisan'ny zotram-piaramanidina Karaiba Andrefana
Herintaona mahery izay no nahantona ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny faritra
Vonona handray ireo vahiny mpitsangatsangana any Belize amoron-tsiraka indray ny Belizeana
Nanambara ny herinandro lasa teo ny Cruise Line Norveziana (NCL) fa hanohy ny antso an-tseranana ho any Harvest Caye any atsimon'i Belize izy ireo, amin'ny 9 aogositra 2021. hiala avy ao amin'ny seranana misy azy ao Montego Bay, Jamaika ny norveziana Joy amin'ny 7 aogositra, ary hampiditra an'i Belize ho ampahany amin'ny zotram-piaramanidina Karaiba Andrefana mandritra ny herinandro.
Ny Ministeran'ny Fizahan-tany sy ny fifandraisana am-pielezana ary ny Birao fizahan-tany Belize dia miarahaba an'ity fanambarana miverina amin'ny serivisy ity Lalana Cruise Norveziana, satria manamarika ny fisokafan'ny sehatry ny fizahan-tany fitsangantsanganana an-tsambo any Belize ity. Herintaona mahery izay no nahantona ny indostrian'ny fitsangantsanganana an-tsambo any amin'ny faritra, ary ireo belizeana an'arivony miasa amin'ity sehatra ity dia vonona handray ireo vahiny mpitsangatsangana any amoron'i Belize indray.
Navoaka ho an'ny mpiasa fizahan-tany any Belize ny vaksiny, ary ny fitomboan'ny orinasam-pizahan-tany amin'ny sehatry ny fitsangantsanganana dia manohy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny Gold Standard Certification (programa momba ny fahasalamana sy fiarovana an'i Belize ho an'ny sehatry ny fizahantany). Miaraka amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra tsy miankina sy ny masoivohom-panjakana mifandraika amin'izany, Belize koa dia namolavola ny protokolom-pahasalamana sy fiarovana izay manohana ny fandefasana fitsangantsanganana an-tsambo any Belize.
Ny sambo fitsangantsanganana an-dranomasina dia namolavola koa ny kaody fiarovana sy fiarovana ary nitondra mpandeha an'arivony tamim-pahombiazana tamin'ny fitsangantsanganana an-tsambo tany Eropa sy Azia tao anatin'ny volana vitsivitsy. NCL dia hampiasa ny programa SailSAFE momba ny fahasalamana sy ny fiarovana mba hiantohana ny fiarovana ireo vahiny mandritra ny sambo sy eny an-dranomasina. Ao anatin'ireto fepetra ireto, ny NCL dia mila vaksiny tsy maintsy ataon'ny mpiasa sy ny vahiny rehetra. Ny toeran-kaleha tsirairay amin'ny làlan-kaleha dia hiasa miaraka amin'ny protokol nohatsaraina ihany koa. Ireo sambo dia nandalo fanavaozana be dia be toy ny rafitra filtration ny mari-pahaizana amin'ny haino aman-jery eny an-tsambo, ny tobim-pahasalamana nohavaozina, ny fanavaozana ny faritra misy ny hetsika mba hihaona amin'ireo toerana lavitra eo amin'ny fiaraha-monina sy ny fanadiovana, mba hanonona vitsivitsy.
Ny filohan'ny NCL sy ny Lehiben'ny mpanatanteraka Harry Sommer dia nilaza fa: "Herintaona taorian'ny nampiatoanay voalohany ny sambo dia tonga ny fotoana farany hanomezantsika ireo vahiny tsy mivadika vaovao momba ny fiverenanay an-tsambo. Niasa tamim-pahavitrihana izahay tamin'ny famerenana ny asantsika, mifantoka amin'ny traikefan'ny vahiny momba ny fahasalamana sy ny fiarovana amin'ny laharam-pahamehana. Mpanakalo lalao ny fahamaroan'ny vaksinin'ny COVID-19. Ny vaksinina, ampiarahina amin'ny protokoloky ny fiarovana sy ny fiarovana tohanan'ny siansa, dia hanampy anay hanome ny vahininay izay heverinay fa fialan-tsasatra mahasalama indrindra indrindra eto an-dranomasina. ”
Ny fiverenan'ny fizahan-tany fitsangantsanganana dia dingana iray tena lehibe amin'ny ezak'i Belize hamerina ny toekarena. Tamin'ny volana lasa teo, NCL dia nanolotra $ 225,000 mahery amin'ny entana maina sy sakafo hanasoavana ny fianakaviana Belizean sy ireo vondrom-piarahamonina atsimo hafa ao amin'ny Distrikan'i Stann Creek sy ny tanànan'i Belize. Ny fanomezana dia nanampy ny olom-pirenena eo an-toerana nisy fiantraikany ara-toekarena tamin'ny vokatry ny areti-mandringana manerantany. Satria manohy manome laharam-pahamehana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny vahiny sy ny mponina ny sehatra, dia manolo-tena amin'ny fanaraha-maso sy ny fiomanana ilaina amin'ny fandraisana antso an-dranomasina fanampiny i Belize amin'ny volana ho avy.